Sida si sax ah loogu hagaajiyo midabka GIMP | Laga soo bilaabo Linux
Sida si habboon loogu hagaajiyo midabka GIMP
Tina Toledo | | Aplicaciones, Naqshad, Kuwa kale, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
1 Sida si habboon loogu hagaajiyo midabka GIMP
2 I.-Maxay tahay inaan u hagaajiyo midabka?
Markii aan ka doodaynay fursadaha GIMP, maadada GIMP ... meesha haa iyo halka mararka qaarkood, oo ah aalad waxtar u leh farshaxanka garaafka, wax aan dhammaanteen ku heshiinno ayaa ah in midabaynta lagu sameeyo qaab RGB waa mid aad u wanaagsan. Marka, waxaan isku dayi doonaa inaan horumariyo mowduucan oo aan ujeeddo kale ka aheyn inaan abuuro hage waxtar u yeelan kara kuwa ku cusub farshaxanadan midabka dhijitaalka ah.
I.-Maxay tahay inaan u hagaajiyo midabka?
Hagaag, marka hore waa inaan fahano waxa midabku yahay iyo, tan ugu muhiimsan, sida aan u aragno, si aan u ogaano sababta magdhawyo taxane ah ay tahay in loogu sameeyo qalab -kumbuyuutar kumbuyuutareed ama daabacad dijitaal ah- waxay u taagan tahay sida ugu dhow xaqiiqda.
Waa maxay midabku? Midabku waa sifo aan u aragno walxaha marka iftiin jiro. Iftiinka wuxuu ka kooban yahay hirarka elektromagnetic-ka oo ku socda qiyaastii 300.000 oo kiilomitir ilbiriqsi kasta. Taas macnaheedu waxa weeye in indhaheennu ay falceliyaan dhacdooyinka tamarta ee ayan u jeedin arrinta lafteeda.
Waa maxay tan macnaheedu? Erayada cad:
Midabyadu maaha astaamo u gaar ah walxaha laakiin waa iftiin.
Iftiin la'aan -mugdi guud- aragti midab la'aan ah
Waxaan u aragnaa midabbo maxaa yeelay walxaha waxay leeyihiin hanti ay ku nuugaan qayb ka mid ah muuqaalka iftiinka oo ka tarjumaya qayb kale.
Hadda, waa in la caddeeyaa in bini-aadamku uu ogaan karo oo keliya qayb ka mid ah hirarka elektromagnetic-ka iftiinka, waxaan ugu yeeraynaa qaybtan la dareemi karo "Muuqaalka Muuqaalka" waana kuwa dhererkoodu dhererkoodu u dhexeeyo 380 iyo 770 nanometer.
Waa maxay sababta RGB? Muddo dheer ninku wuxuu raadinayey hab uu ku soo qabto oo ku soo saaro midab isaga oo isku dayaya inuu ugu dhowaado sida ugu macquulsan ee uu u arko dabeecadda, labada dariiqo "Farsamo" ama macmal ah in sidaas la sameeyo waa wicitaanada Lagu daro y Kala-goyn. Ereyga RGB ka yimid Casaan, Gren y Blue -Casaan Casaan ahiyo buluugl- oo u dhiganta jidka Lagu daro si loo soo saaro midabka.
Qaabka lagu daro ee midabada casaanka, cagaarka, buluuga ah.
Sida sawirka loogu soo saaro nidaamka RGB
Hadda ma falanqeyneyno, in muddo ah iyo si aanan u abuurin jahwareer, nidaamka Kala-goyn waxaanan si gaar ah diirada u saari doonaa RGB (Daro), taas oo ah tan aan u adeegsan doonno GIMP, maadaama tan ay tahay nidaamka loo isticmaalo in lagu soo saaro midabka kormeerayaashayada waana habka ay kamaraduhu ku qabtaan.
"Si aad u wanaagsan TinaCho Dhammaan choro-yadaas waa kuwo aad u wanaagsan, laakiin maxaad ugu habboon tahay inaad midabka hagaajiso?, Labadayda akhristayaal ayaa odhan doona.
Waxaan isku dayi doonaa inaan ugu sharaxo qaab ay fahmi karaan qof walba: markaan aadno dukaanka qalabka guryaha waa wax caadi ah inaan aragno TVyo badan oo shidan iyo in, inkasta oo ay la socdaan isla kanaalka, midabada ayaa u muuqata kala duwan Tani waxay sabab u tahay dhacdo jireed oo la yiraahdo Range Midab Dynamic taas oo aan ka badneyn awoodda qalab kasta u leeyahay inuu metelo aag ka mid ah muuqaalka muuqaalka midabka leh.
Sidaa darteed, tusaale ahaan, laba kamaradood ayaa qaban kara kala duwanaanta midabbada kala duwan iyadoon loo eegin xallintooda pixels halkii inji.
Jaantuskani wuxuu muujinayaa sida laba qalab -A iyo E-
waxay leeyihiin kala duwanaansho kala duwan oo midab leh RGB
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Sida si habboon loogu hagaajiyo midabka GIMP
Weyn, waxaan rabay inaan sii wado aqrinta .. Masterful Tina UU
Sugitaanka hada qeybta labaad =)
Ma ahan wax cadaalad ah, marka hore waxaad na kor "samada" iyo in ilbiriqsiyo gudahood "hoose" noo XD. Waxaan sugayaa sii wadida 😉
PS Haddii aad isiin karto talo si aan ula mid noqdo midabada waa la qadarin doonaa (ama codsi ku saabsan Linux ama gacanta: P)
Tina weyn 😀
Aan aragno haddii aan baran karo isticmaalka ... ugu yaraan si dhexdhexaad ah GIMP HAHA, marwalba waxaan ahaa musiibo markay tahay sameynta sawirka image _ ^ U
Fikraddu waa in lagu soo bandhigo shayada "qaniinyo yaryar" si ay si fudud uga dheefshiidi karaan. Waxaan isku dayayaa inaanan adeegsan luqadda farsamada ee farshaxanka garaafyada maxaa yeelay waxaan ka warqabaa in kuwa badan oo halkan jooga ay yaqaanaan oo ay bartaan markay tahay nidaamyada hawlgalka, laakiin in badan oo ka mid ahi ma yaqaanaan Aragtida Midabka
Hadda, haddii aad dareento inaan gaabis ahay, ii sheeg oo waxaan gaarsiinta ka sii dheereynayaa, kaliya hal wax maskaxda ku hay; Waxaan isku dayayaa inaan ku soo koobo afar cutub waxa igu qaadatay simistar in aan ka barto Jaamacadda.
GaraUgu yaraan midab ahaan waxaan kuu xaqiijinayaa in tan ka dib aad siin doontid wax ka badan hal laab dad badan oo sheegta inay yihiin naqshadeeyayaal garaafyo.
Tina wanaagsan, maxaa yeelay waan jeclahay naqshadeynta garaafka, naqshadeynta websaydhka iyo sawir qaadista. Aan aragno haddii aan hadda ku faraxsanahay waxaanan ku bilaabayaa caawimaadda qodobbadaada 😀
Wax qabad, xiiso iyo madadaalo leh.
Ku jawaab esmorga
Taasi waa sababta aysan macno lahayn haddii Tina ay sameysay mowduucyo aad u ballaadhan si aan dhammaanteen wax u baranno = P
Dhankeyga, waan ku raaxeystaa aqrinta qoraaladaada, waana ogahay in kuwa kaloo badan ay sidoo kale sameeyaan 😀
Nasiib wacan iyo mahadsanid qodobada tina.
Qaybta labaad horey ayey ugu jirtey saxaarada dib u eegista ...
Waqtigan xaadirka ah waxaan dib u eegay oo aan ansixiyay 😀
Aad baad ugu mahadsantahay wax walba 😀
Way fiicantahay inaad si toos ah uga tagto aniga oo kale, in ka badan wax kasta oo aad keydiso shaqada
Ha qosol badan, midkaan ayaa ogaanaya farqiga u dhexeeya hiwaayadda (aniga) iyo xirfadle.
Nasiib wanaag waad joogtay.
Maqaalka xiisaha leh, sidaa darteed Gimp-gu uma eka sida uu aniga iigu adag yahay
Cajiib! Aragtida midabka, naqshadeeyayaasha garaafka ah ... qormooyinkan taxanaha ah waxaan si hubaal ah uga sii fiicnaan doonnaa isticmaalka GIMP Mahadsanid!
Salaan ka timid FanBoy # 1 Tina
Sida si sax ah loogu hagaajiyo midabka GIMP (iyo 2)
Microsoft waxay ku qasbi doontaa inay xannibto boot UEFI qalabka ARM